Emma Stone naAndrew Garfield vakaona 'vachitaridzika zvakanyanya kunge vaviri': Rondedzera - Nhau
Kuru Macelebs Varaidzo Nhau Blog
Emma Stone naAndrew Garfield vakaona 'vachitaridzika zvakanyanya kunge vaviri': Rondedzera
Pane chimwe chinhu chakakwira Emma Dombo uye Andrew Garfield zvakare?
Vatambi - ndiani kupatsanurwa muna 2015 mushure memakore angangoita mana ekudanana-uye-kure kufambidzana - vaiona vachidya pamwe chete kuresitorendi yeDell'anima yeNew York City musi waMay 22, Peji Rechitanhatu inoshuma, zvichitungamira vamwe vashandi kuti vazvibvunze kana vangangodzoka pamwe chete.
'Vakanga vachitaura uye vakagara padhuze padyo,' mucherechedzi akaudza gonyeti reNew York Post. 'Ivo vaiseka uye vachinyemwerera. Ivo vaviri vaitaridza kufara. '
Vakuru vacho 'vaitaridzika kunge vaviri,' akadaro mucherechedzi.
Asi nekukurumidza kwayakaratidza mukana wekudzorerwazve kwerudo, Peji Rechitanhatu rakaripwanya, richinyora kuti 'Vaviri, avo vatinonzwa kuti ishamwari chete, vanga vachiwirirana kubva pakurambana kwavo uye vachigara vachirumbidzana pachena.'
Zvakaratidzwa muna 2017 kuti Emma, ​​29, aive kudanana 'Mugovera Night Live' chidimbu director Dave McCary, kunyange zvisiri kujeka kana vachiri vaviri ikozvino. Vakaratidzika kunge vekupedzisira kutora mifananidzo pamwe muna Kukadzi 2018 vachisiya 'SNL' mushure meparty pamwechete.
Mumavhiki apfuura, tabloids dzakadzora pfungwa yekuti Emma naJustin Theroux, 46, waanoshanda naye mumutambo unotevera weNetflix 'Maniac,' vanogona kunge vachidanana sezvo vaonekwa vachidya pamwechete uye vasiya 2018 Yakaungana Gala pamwe chete muna Chivabvu 7.
Andrew, 34, haasati abatanidzwa pachena kune chero munhu mumakore achangopfuura, kunyangwe akadanana nemusikana we'Westworld 'Shannon Woodward pamberi paEmma.
Andrew naEmma - avo vakatanga kukura padhuze mushure mekusangana vachigadzira 'Iyo Inoshamisa Spider-Man' - kwakamutsa runyerekupe rwekuyananisa muna Chivabvu 2017 zvakare apo akahwina Oscar akamushanyira muLondon kwaaitamba mumutambo wekuratidzira we'Angels muAmerica. 'Aive muvateereri achiona shoo,' akadaro munhu akaona Vanhu panguva iyoyo, achiwedzera, 'Akasiya backstage naye.'
Andrew naEmma, ​​sosi yakaudza Vanhu panguva iyoyo, 'Handina kumborega kuva nehanya nezve mumwe nemumwe. Kunyangwe pavakaparadzana, Emma naAndrew vaive nerudo rukuru nekuremekedzana. '
jimmy fallon kurambana
Mwedzi mishoma yapfuura muna Zvita 2016, paakabvunzwa panguva yehurukuro kuHollywood Reporter uyo waaizoda kuuya naye kana akasungwa pachitsuwa cherenje, Andrew akadaro Emma. 'Ndinoda Emma. Anofara. Anogona kuuya. '
Mudzimai waRobert De Niro ari kumanikidza kurambana kwavo kuti vatariswe nechinangwa here?
Iwe unofanirwa kuona izvo TV icon Sally Jessy Raphael anotaridzika kunge izvozvi
rob lowe uye demi moore
aryn drake-lee naJesse williams muchato
mariah carey kubatanidzwa mhete replica
akanakisa evana mafirimu emakumi mapfumbamwe
demi lovato uye ufc murwi
fluffy gabriel iglesias kuonda